SONATA-CANTATA: October 2008
ပုံကို ဤနေရာမှ ယူသည်။
“အချိန်ကို အကျိုးရှိစွာ အသုံးချဖို့” အတွက် အချိန်နောက် အမောတကြီး လိုက်နေခဲ့တယ်။ တကယ်ပါ နောက်ကလိုက်ရတာပါ။ သူရှေ့များရောက်ဖို့တော့ စိတ်တောင်မကူးရဲပါဘူး၊ ကျွမ်းထိုးမှောက်ခုံ ဖြစ်သွားမှာစိုးလို့ပါ။ တနေရာရောက်တော့ ရပ်ကြည့်တယ်။ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ပြန်မေးတယ်။ “ဘာရလိုက်သလဲ”။ သည်းသည်းကွဲကွဲ ပြန်ကြားရတဲ့ အသံက “ဘာမှလည်း မအောင်မြင်သလိုပဲ” တဲ့။ အသံကတော်တော်လေး ကျယ်လောင်နေတယ်။ ကိုယ် ကိုယ်တိုင်ရော ဘေးကလူတွေပါ ၀ိုင်းပြောကြတာကိုး။ ဘေးဘီကို ကြည့်လိုက်တော့ ကိုယ်လိုလူတွေ ရှိတယ်။ သတိထားမိသွားတယ်။ ဘယ်အချိန်ဖြစ်စေ ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုတာ ကိုယ်လိုလူတွေနဲ့ ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ထားတာပါလား ဆိုတာ။ လူရယ်လို့ ဖြစ်လာတော့ ကိုယ့်မိသားစုက ကိုယ့်ကို ဆီးကြိုနေတယ်။ ငယ်ငယ်တုန်းက ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ကျောင်းနေဖက် သူငယ်ချင်းတွေရှိတယ်။ ပညာရှာတဲ့ အရွယ် ပညာရှာခွင့် ရခဲ့သူပေကိုး။ ဒ်ီအခွင့်အရေး မရရှာခဲ့ သူတွေကတော့ သူတို့နဲ့ ဆိုင်ရာဆိုင်ရာ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ကျင်လည် ကျက်စားကြလို့။ ကျောင်းပညာစခန်းပြီးလို့ လုပ်ငန်းခွင်ဝင်ကြတော့ လုပ်ဖေါ်ကိုင်ဖက်တွေနဲ့ လုပ်ငန်းခွင်ဆိုတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ကိုယ်လိုလူတွေနဲ့ တွေ့ကြပြန်ပါတယ်။ အချို့လည်း ကံကောင်းတော့ ငယ်ငယ်က ကျောင်းနေဖက် သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ လုပ်ငန်းခွင်မှာလည်း တပူးတွဲတွဲ။ လုပ်ငန်းခွင်က အနားယူလို့ ကျောင်းကန်ဘုရားသွား ဒါန၊ သီလ၊ ဘာဝနာ အလုပ်တွေ လုပ်ကြပြန်တော့လည်း စေတနာ ဓာတ်ခံခြင်း အကျိုးအကြောင်းညီညွတ်တဲ့ လူတွေနဲ့။
အရေးကြီးတာက သူတော်ချင်းချင်း သတင်းလွေ့လွေ့ ပေါင်းဖက်တွေ့ဖို့ ပါ။
အမှိုက်ရှိရာ အမှိုက်စု ထဲမပါဖို့ရာ။
လက်ရှိအခြေအနေအရ လောဘကတော့ သိပ်ခေါင်းမထောင်နိုင်ပေဘူး။ ရှာမှ မရှာနိုင်တာကို။ ရှာရတာနဲ့ လောက်အောင်သုံးရတာလည်း အကြပ်အတည်း မရှိလေပဲ။ ‘လောဘ နဲနဲလျှော့မလား’ ဆိုတော့ ဒေါသက ... လျှော့ထားရတဲ့ လောဘအတွက်ပါ ပိုပိုသာသာ အားဖြည့်လို့ အလုံးအရင်းနဲ့ နေရာယူတယ်။ နိစ္စဓူဝ ကိုယ်ပတ်သက်နေရသူတွေက အခြားသူတွေလည်း မဟုတ်။ များများစားစားလည်း အခြေအနေ အရ မရှိ။ မရှိနိုင်။ ကိုယ့်ကို မွေးသူတွေ၊ ကိုယ်ကမွေးသူတွေ၊ ကိုယ်နဲ့ ရင်ဘောင်တန်းသူတွေကို လှည့်ပတ်ပြီး မေတ္တာရဲ့ ဆန့်ကျင်ဘက်နဲ့ ကာယကံ၊ ၀စီကံတွေ လုပ်နေတာ။ ပြဿနာရှာစရာမရှိရင် ထုတက်နေတဲ့ ဖုန်တွေ၊ ကြမ်းပြင်အနှံတွေ့နေရတဲ့ ဆံပင်ချည်တွေနဲ့ ရန်ဖြစ်တယ်။ တော်တော်လေး မောလာပြီဆိုရင်တော့ အမြဲတမ်း အဖေါ် မောဟကိုပဲ ညရယ်၊ နေ့ရယ် အချိန်အခါမရွေး သာသာထိုးထိုးလေး မျက်နှာသာပေးပြီး အိပ်ယာပေါ်မှာ စက်တော်ခေါ်။
အမြဲတမ်း အဖေါ်ကို လက်တွဲဖြုတ်ဖို့
"မိတ်ဆွေ..လူ့ဘ၀ကို အကျိုးရှိဖို့ အသုံးချလိုက်..."
Nineteen Eighty-Four သည် George Orwell ၏ အအောင်မြင်ဆုံး ၀တ္ထုတစ်ပုဒ် ဖြစ်သည်။ ထိုဝတ္ထု၏ အဓိက ဇာတ်ကောင်ဖြစ်သော Winston သည် သစ္စာတရားဝန်ကြီးဌာန (Ministry of Truth) တွင် အမှုထမ်းသည်။ ဤ၀န်ကြီးဌာနက သမိုင်းမှတ်တမ်းများကို ပါတီ၏ မူဝါဒများနှင့် ကိုက်ညီစေရန် ပြုပြင်ပေးရသည်။ လိုအပ်ပါက လူအချို့၏ သမိုင်းမှတ်တမ်းများကို ဖျောက်ဖျက်ပေးသည်။ ထိုသူတို့၏ အကြောင်းရေးသားထားသော စာအုပ်, ဆောင်းပါး, သူတို့၏ ဓာတ်ပုံများကို ဖျောက်ဖျက် ပေးရသည်။ ယုတ်စွအဆုံး သူ့နှင့် နီးစပ်သော မိတ်ဆွေအသိုင်းအ၀ိုင်း၊ ဆွေမျိုးသင်္ဂဟတို့ကပင် ထိုသူတို့ကို မေ့ပျောက်သွားအောင် ကူညီပေးရသည်။ ဤသည်မှာ သစ္စာတရားဝန်ကြီးဌာနတွင် Winston ဆောင်ရွက်ရသော တာဝန်များဖြစ်သည်။
ဤသို့ဆန်ကျင်ဘက် အယူအဆတို့ကို တပြိုင်နက်တည်း လက်ခံထားနိုင်မည့် အရည်ချင်းများကို သမုဒ္ဒရာဇ် (Oceania) နိုင်ငံသားတို့အား ပြုစုပျိုးထောင်ပေး ထားသည်။ မုသားကိုလည်း မိမိစိတ်တွင် နှစ်နှစ်ကာကာ ယုံကြည်ပြီး ပြောဆိုနိုင်ရမည်။ မိမိတို့အတွက် အဆင်မပြေသည့် အမှန်တရားတို့ကိုလည်း မေ့ပျောက်ထားနိုင် စွမ်းရမည်။ ထိုသို့ လေ့ကျင့်ပျိုးထောင်ပေးရခြင်းအား သမုဒ္ဒရာဇ်နိုင်ငံတော်၏ “ဘာသာစကားသစ်” (Newspeak) တွင် “ဒွိဟအမြင်” (Doublethink) ဟုခေါ်သည်။ ဒွိဟအမြင်သည် သာမာန် ကြောင်သူတော်အရည်ခြုံ ဟန်ဆောင်ခြင်းမျိုး မဟုတ်တော့။ အမှားကို နှစ်နှစ်ကာကာ လက်ခံနိုင်ခြင်းဖြစ်သည်။ အမှန်ကို လိုလိုလားလား မေ့ပျောက်နိုင်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဒွိဟအမြင်ကို နားလည်နိုင်ရန် ဒွိဟအမြင်ရှိဖို့လိုသည်။ ဒွိဟအမြင်သည် သာမာန်တွေဝေခြင်းမျိုး မဟုတ်။ စနစ်တကျ ပြုစု ပျိုးထောင် (ဖျက်ဆီး) ထားရသော အရည်အသွေးဖြစ် နေ၍၊ ထိုဒွိဟအမြင်အား သာမာန်နည်းလမ်းဖြင့် ကုစား၍ မရ။ ဤကား ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အပြီး စစ်အေးကာလ အရှိန်မရသေးခင် ၁၉၄၉-ခုနှစ်မှ စပိန်, ဂျာမဏီနှင့် ဆိုဗီယက်နိုင်ငံတို့ကို လေ့လာကာ၊ အနာဂတ် ကွန်မြူနစ်အာဏာရှင်စနစ်၏ အန္တရာယ်ကို ပုံဖော်ရန် ရေးသားခဲ့သော “1984” ၀တ္ထု၏ ကျောရိုးဖြစ်သည်။
George Orwell သည် စက်မှုနည်းပညာများဖြင့် အနာဂတ် လူထုဆက်သွယ်ရေးကို တစ်စိတ်တစ်ဒေသ မှန်းဆနိုင်ခဲ့သော်လည်း၊ တတိယလှိုင်းဆက်သွယ်ရေးကိုမူ မမြင်နိုင်ခဲ့။ ပထမလှိုင်း စိုက်ပျိုးရေးခေတ်တွင် ဆက်သွယ်ရေးသည် လူအုပ်စုကို အခြေတည်ရသည်။ အမိန့်ကျေညာချက်များကို မောင်းကြေးနင်းခတ်၍ ကျေညာရသည်။ လူတို့က ဟစ်တိုင်တွင် အော်၍ မင်းဧကရာဇ်တို့ကို အသိပေးရသည်။ စီးပွားရေးကြော်ညာများ, နိုင်ငံရေးလှုံ့ဆော်ချက်များကို ပိုစတာများကပ်၍ ဖြန့်ဖြူးရသည်။ ကောလာဟလများ, တပေါင်များ, တီးတိုးစကားများသည် ပထမလှိုင်းဆက်သွယ်ရေးပုံစံဖြစ်သည်။
ဒုတိယလှိုင်း စက်မှုခေတ်၏ အဓိကလက္ခဏာသည် အမြောက်အများ ထုတ်လုပ်ရေးဖြစ်သည်။ ထို့အတူပင် စက်မှုခေတ် ဆက်သွယ်ရေးသည် သတင်းစာ၊ မဂ္ဂဇင်း၊ ရုပ်ရှင်၊ ရေဒီယို၊ ရုပ်သံများဖြင့် လူထု အမြောက်အများအား တစ်ချိန်တည်းထုတ်လွင့်သည့် ပုံစံဖြစ်သည်။ အလုပ်မသွားမှီ နံနက်စာစားရင်း သတင်းစာဖတ်ခြင်း၊ အိမ်ပြန်ရောက်၍ ညစာစားပြီးသော် ရုပ်သံသတင်း ကြည့်ရှုခြင်းသည် ဒုတိယလှိုင်းခေတ်မှ လူတို့၏ စတိုင်ဖြစ်လာသည်။ ရတနာပုံသတင်းစာသည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဒုတိယလှိုင်း လူထုဆက်သွယ်ရေးသို့ ပြောင်းလဲရန် ကြိုးပမ်းမှု ဖြစ်သည်။ “ငါမကောင်းလျှင် ငါ့ကိုရေး။ … မင်းတို့ သတင်းစာတိုက်၌ အပြစ်မရှိ။” ဟု မင်းတုန်းမင်းကြီးကလည်း အားပေးခဲ့သည်။ သို့သော် George Orwell ၏ ၀တ္ထုမှ သမုဒ္ဒရာဇ်နိုင်ငံတော်ပါတီကမူ ဒုတိယလှိုင်း လူထုဆက်သွယ်ရေးအား ထိန်းချုပ်ကာ လူထု၏ အသိစိတ်ကိုပင် လွမ်းမိုး ကွပ်ကဲရန် ကြိုးပမ်းသည်။ Telescreen ခေါ် အသွားအပြန်ရသော ရုပ်သံများဖြင့် လူထုကိုဝါဒဖြန့်ရင်း တစ်ချိန်တည်း၌ပင် ထိုရုပ်သံတို့တွင် မြုတ်နှံထားသော အသံဖမ်း ကိရိယာများဖြင့် လူတို့ကို စောင့်ကြည့်နေလိမ့်မည်ဟု မှန်းဆခဲ့သည်။
တတိယလှိုင်း information ခေတ်၏ ပဓာနလက္ခဏာသည် လူထုသဘောထက် လူတစ်ဦးချင်းစီကို တန်ဖိုးထားသည်။ ပုံစံတူပစ္စည်းများကို အမြောက်များ ထုတ်လုပ်ခြင်းထက် စားသုံးသူ တစ်ဦးချင်းစီတို့၏ အကြိုက်အလိုက် customized လုပ်ထားသော ပစ္စည်းထုတ်လုပ်မှုဆီသို့ ကူးပြောင်းသွားသည်။ ယင်းကို de-massification ဟုခေါ်သည်။ ဆက်သွယ်မှုပုံစံများလည်း ပြောင်းလဲသွားသည်။ ရုပ်ရှင်ထက် DVD ခွေများခေတ်စား လာသည်။ ဗီဒီယိုကင်မရာများ၊ ဒစ်ဂျစ်တယ် ကင်မရာများသည် လူတိုင်းနီးပါး အသုံးပြုနိုင်သော ပစ္စည်းဖြစ်လာသည်။ လက်ကိုင်ဖုန်းများ တွင်ကျယ်လာသည်။ လက်ကိုင်ဖုန်းဖြင့် ဓာတ်ပုံ, ဗီဒီယို ရိုက်နိုင်လာသည်။ မီဒီယာများကို ပုံစံတစ်မျိုးမှ တစ်မျိုးသို့ လွယ်လင့်တကူ ကူးပြောင်းပေးနိုင်သည်။ Online news, online magazines, e-books များက သတင်းစာ၊ မဂ္ဂဇင်းများကို အစားထိုးလာသည်။ မိမိအလိုရှိသော ဇာတ်လမ်း, အစီအစဉ်တို့ကို ရွေးချယ် ကြည့်ရှုနိုင်မည့် Video-On-Demand များ ထွန်းကားလာသည်။ အင်တာနက်ကွန်ရက်များက ကမ္ဘာတစ်ဝန်းမှ လူများကို ဆက်သွယ်ပေးသည်။ Blogများ ထွန်းကားလာသည်။ စာရေးသူနှင့် ဖတ်သူအကြား အပြန်အလှန်တိုက်ရိုက် ဆက်သွယ်လာနိုင်သည်။ လူတိုင်း နီးပါးပင် စာနယ်ဇင်းသမားများ ဖြစ်လာနိုင်ရန် တတိယလှိုင်း နည်းပညာက ပံ့ပိုးပေးသည်။
သို့သော် George Orwell သည် တတိယလှိုင်းခေတ်ကိုတော့ ကျော်မမြင်နိုင်ရှာတော့။ “Big Brother is watching you” ဟုရေးထားသည့် ပထမလှိုင်းလူထုဆက်သွယ်ရေးဖြစ်သော ပိုစတာကြီးများဖြင့် လူထုကို သတိပေးသည်။ ဒုတိယလှိုင်း ဆက်သွယ်ရေးကိရိယာတစ်မျိုး ဖြစ်သော Telescreen ခေါ် အသွားအပြန်ရသော ရုပ်သံဖြင့် လူတို့ကို ၀ါဒဖြန့်ရင်း စောင့်ကြည့်နိုင်ပုံကိုတော့ စိတ်ကူးယဉ် ကြည့်ခဲ့သည်။ ထိုဝတ္ထုထဲမှ သမုဒ္ဒရာဇ်နိုင်ငံတွင် လူတန်းစားသုံးမျိုးရှိသည်။ Big Brother (BB) သည် နိုင်ငံတော်၏ အကြီးအကဲဖြစ်သည်။ လူဦးရေ၏ ၂% ထက်မပိုသော လက်တစ်ဆုပ်စာ လူတန်းစားတို့သည် အခွင့်ထူးခံ အတွင်းစည်းပါတီ (Inner Party) ၀င်များ ဖြစ်သည်။ လူဦးရေ ၈၅% သည် အခြေခံလူတန်းစား (proles) များဖြစ်သည်။ ထိုအခြေခံလူတန်းစားတို့အား လောင်းကစား, မူးယစ်သေစာ, အပျော်အပါးများဖြင့် နှစ်သိမ့်ထားသည်။ အားကစား, ပြစ်မှု, ဗေဒင်ဟောစာတမ်း, အတင်းအဖျင်း နှင့် အပေါစား ၀တ္ထုတို့လောက်သာ ပါသော prolefeed ခေါ် အပေါစား စာမျိုးတို့ကိုသာ ဖတ်စေသည်။ ကျန်လူတန်းစားတို့မှာ ပါတီ၏ မူဝါဒများကို အကောင်ထည်ဖော်ပေးရသော လက်ကိုင်တုတ်ဖြစ်သည့် အပြင်စည်းပါတီ (Outer Party) ၀င်များဖြစ်သည်။ အဓိက ဇာတ်ကောင်ဖြစ်သော Winston သည် အပြင်စည်းပါတီဝင် ဖြစ်သည်။ သို့သော် သူက ပါတီ အပေါ်တွင်မယုံ။ အမှန်တရားကို မြတ်နိုးသည်။ သို့သော်လည်း ပါတီကို မလွန်ဆန်နိုင်။ အခြေခံလူတန်းစားတို့ အသိပညာမရှိသမျှ ပါတီကိုတော်လှန်မည်မဟုတ်။ သို့သော်လည်း မတော်လှန်သေးသရွှေ့ အခြေခံလူတန်းစားတို့ အသိပညာရရှိလာရန်မှာ မဖြစ်နိုင်။ ယင်းမှာ ဒုတိယလှိုင်းတွင် ပိတ်မိနေသော Winston မြင်သည့် သမုဒ္ဒရာဇ်နိုင်ငံသားတို့၏ အကျပ်အတည်း ဖြစ်သည်။ သို့သော် တတိယလှိုင်း လူထုဆက်သွယ်ရေး မီဒီယာများဖြစ်သော DVD, Online-news နှင့် လက်ကိုင်ဖုန်းများသည် ရုပ်ရှင်, သတင်းစာ, ရုပ်သံများကို ထိန်းချုပ်ရသည်လောက် မလွယ်ကူတော့။ တတိယလှိုင်း ဆက်သွယ်ရေးဖြင့် အခြေခံလူတန်းစားများကို အသိပညာ ပေးနိုင်လာသည်။ တတိယလှိုင်းသည် Winston ၏ မျှော်လင့်ချက်အတွက် လင်းရောင်ခြည် ဖြစ်လာသည်ကို George Owrell မမြင်နိုင်ရှာခဲ့တော့။
“မျှော်လင့်ချက်ရှိသေးလျှင်၊ ထိုမျှော်လင့်ချက်သည် အခြေခံလူတန်းစားတို့အပေါ်၌သာ တည်သည်။” [Winston]
1. George Orwell: Nineteen Eighty-Four
2. Alvin Tofler: PowerShift
မိန်းမတို့သည် ပညာဉာဏ်နုံနဲ၏။ ရေရှည်ကို မကြည့်၊ ရေတိုကိုသာ ကြည့်တတ်မြင်တတ်ကြ၏။ ထို့ကြောင့် အချို့သော အရေးကိစ္စများကို မိန်းမတို့အား မသိစေအပ်။
မနာလို ၀န်တိုမှုကိုလည်း မိန်းမတို့၏ ပြယုဂ်လေ အလား ဆိုတတ်ကြလေသေး၏။
ကြီးကျယ်မြင့်မြတ်ခြင်း၏ သင်္ကေတဟုလည်း ဆိုခွင့်ရှိက ဆိုကြလေသေး၏။
အေး ယောက္ခမကြီး၏ မြန်မာပြည် ပြန်မည့်ရက်သည် နီးကပ်လာလေပြီ။ တနေ့တော့ မိတ်ဆွေ အန်ကယ်ကြီး တစ်ရောက်ထံမှ ဖုန်းဝင်လာ၏။ Jetstar Airline မှ Sale ချနေကြောင်း။ ဟုတ်ကဲ့အန်ကယ် သမီး အခုပဲ website ၀င်ကြည့်လိုက်ပါမယ် ဆိုပြီး ယောက္ခမကြီး၏ အသွားအပြန် လေယာဉ်လက်မှတ်ကို online မှပင် တစ်ခါတည်း ၀ယ်လိုက်၏။ Confirmation ကို print out ထုတ်ယူထားလိုက်ပါသည်။ ဒါသည် အေးအတွက် ပထမဦးဆုံးအကြိမ် e-booking ဖြစ်ပါသည်။
ခရီးသွားမည့်ရက် မရောက်မီ တစ်ခုသော တနင်္ဂနွေနေ့ နံနက်တွင် ဖြစ်ပါသည်။ “ဒီမှာ မေမေ့ လေယာဉ်လက်မှတ်ကို website မှာ တစ်ချက် ပြန်စစ်ပေးဦး။” ခင်ပွန်းသည် ကိုပြေငြိမ်းကို ပြောလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ (အိမ်တွင် အေး၏လေသံသည် မည်သူနှင့် ပြောပြော ပုံမှန်အားဖြင့် မာကျောပါသည်။)
အေး ကမ်းပေးလိုက်သော စာရွက်များကို သုန်မှုံသော မျက်နှာဖြင့် လှမ်းယူကာ notebook ကို မဖွင့်ချင် ဖွင့်ချင်ပုံစံဖြင့် ဖွင့်၏။ အေး၏ မူပိုင် ပညာရှင်ကြီးအကြောင်း အေးသိပါသည်။ သူသည် လုပ်ငန်းဆောင်တာ တစ်ခုကို အစမှ အဆုံးတိုင် စေ့စပ်သေချာစွာ အပင်ပန်းခံ လုပ်ဆောင်တတ်သူ ဖြစ်ပါသည်။ သို့ပါသော်လည်း သူတစ်ပါး လုပ်ထားသည့် လုပ်ငန်း တစ်ပိုင်းတစ်စကို စစ်ဆေး အပြီးသတ်ရခြင်းမျိုးကတော့ သူ့အသဲအူကို စွဲယူညှစ်သလို ခံစားရသည် ဟူသတတ်။
ကိုပြေငြိမ်းက “verification number က ဘယ်မှာလဲ?”
“verification number မသိရင် ဘယ်လိုလုပ်စစ်လို့ ရမှာလဲ မှားပြီ မှားပြီ။”
“အောင်မလေးတော်.. မှားရင်လည်း ရုံးအကြောင်းကြားပေါ့.. အေးလည်း မလုပ်တတ်လို့ ရှင့်ကို စစ်ခိုင်းတာပဲ
ရှင်ဟာလေ အိမ်အတွက် ဆို စေတနာလေးနဲ့ ကို မလုပ်ချင်ဘူး။ မှားပြီ ဆိုရင်လည်း ဘယ်လိုဆက်လုပ်ကြမလဲ စေတနာလေးနဲ့ ရှင်စဉ်းစားပါလား။” အေးက ဗျစ်တောက်ဗျစ်တောက်ပြောပြီး အခန်းထဲမှ ထွက်လာခဲ့သည်။
အေးတို့ အခန်းထဲမှာ ကျိတ်ကျိတ် ကျိတ်ကျိတ် ဖြစ်နေတာကို နားစွန် နားဖျား ကြားသော သားတော်မောင်သည် တာဝန်ကျေစွာ သူ့ အဖွားကို သတင်းပို့ နေပါပြီ။
“ဖွားဖွား.. ဖွားဖွား” .. “ဖွားဖွား လေယာဉ်လက်မှတ်က မရဘူးတဲ့”
“ဟေ ဟုတ်လား မရဘူးတဲ့လား။” ဒီလောက်ပဲပြောသံကြားလိုက်ရပါသည်။ ထစ်ကနဲဆို မြည်တွန်တောက်တီး တတ်သည့် လျှာနှင့် သွား အကြောင်းတော့ လူကြီးတွေက ဒါမျိုး ရိုး..ဟိုးဟိုးးးး ဆိုသော အနေအထား ဖြစ်နေပါပြီ။
ခဏ အကြာ မျက်နှာ ရှစ်ခေါက်ချိုးနှင့် အေး ဘာလိုလို ညာလိုလိုနှင့် အခန်းထဲ ပြန်ဝင်လာတော့ ကိုပြေငြိမ်းက
“ဒီမှာ ဒီမှာ ရပြီ အေး print out ထုတ်ထားတာနဲ့ တစ်ပုံစံထဲပဲ။”
“အဲ့ဒါလေးပါ print out ထပ်ထုတ် လိုက်ဦး” ဟု အေးက အထွန့်တက်၏။ (လူတို့၏ သဘောသည် ကိုယ်ကနိုင်ရပြီ ဆိုလျှင် ဖိနင်းချင်၏။)
“ဘယ်လိုလုပ် ထုတ်လို့ရမှာလဲ printer မှ install မလုပ်ထားတာ။”
“ထုတ်လို့ မရလည်း မထုတ်နဲ့ဟာ။”
“စကားပြောရင် ကောင်းကောင်းပြောစမ်းပါ။” ဟု ကိုပြေငြိမ်းက အော်သည်။
သားတော်မောင်၏ အခန်းကဏ္ဍရောက်ရှိလို့ လာပါချေပြီ။
“ဖေဖေနဲ့ မေမေတို့ ရန်ဖြစ်နေကြတာလား?”
“ရန်ဖြစ်ရင် သားသားကိုသာ ခေါ်လိုက် ရန်ငြိမ်းအောင် လုပ်ပေးမယ်။ သားနံမည်က ရန်ပြေငြိမ်းလေ။”
အမှန်တရား အတွက် ပညာသည် ပဓာနကျပါ၏။ သို့သော်…
ကရုဏာ မပါသော ပညာသည် ခက်ထန်၏။ ကောက်ကျစ်ချင်၏။
ပညာမပါသော သဒ္ဓါ စေတနာသည် အရာမရောက်။ လမ်းလွဲတတ်၏။
အေးသည် “သားကို သခင်၊ လင်ကို ဘုရား” ဆိုသော အဆိုအမိန့်ကို ကောင်းကောင်းကြီး လက်ခံနိုင်သော အခွင့်ထူးကို ရရှိထားသည့် မိန်းမသား တစ်ယောက်ဖြစ်ပါသည်။
ဒီတစ်ခါတော့ အပီရေးမယ်လို့ လည်း ကိုယ့်ကိုယ်ကို သံပတ်တင်းပါတယ်။ (ဆရာမ မေအောင်ကလည်း အဖျားရှူးတတ်လွန်းလို့တဲ့ ဆူနေပြီ။) reference book တွေ ဘာတွေ ချပြီးတော့ကို ရေးတာပါ။ အဖြစ်အပျက်လေးနဲ့ ဆက်စပ်ပြီး ခေါင်းထဲရောက်လာတဲ့ အတွေးတွေ ချရေးပါတယ်။ အနီးဆုံးလူကို အချိုသာဆုံး မျက်နှာလေးနဲ့ စာမူပြတော့ ပယ်ချလေ၏။ စိတ်မဆိုးပါဘူး။ နင်လားဟဲ့ လောကဓံ ဆိုပြီး ပြင်ရတယ် ပြင်ရရှာတယ်။ မမခင်ဦးမေ .. ခင်မဟုတ်ဘူးနော်။ အေး.. အေး.. ပြင်လိုက်ဦး။ (သူလည်း ၀တ်ထု ဖတ်ပြီး ဈာန်ဝင်သွားတာ မင်းသမီးနေရာ ရောက်သွားလို့ ဖြစ်မှာပါ။ ခင်ရေ ဟုတ်တယ်ဟုတ်။)
ရေးချင်တာလေးကတော့ အယင်က မှတ်သား လေ့လာဖူးတဲ့
ယောက်ျားတွေက ပညာကို ကိုယ်စားပြုတယ်။
မိန်းမတွေက သဒ္ဓါကို ကိုယ်စားပြုတယ်။
ယောက်ျားနဲ့ မိန်းမ အတွဲညီရသလို ပညာနဲ့ သဒ္ဓါကလည်း အတွဲညီရတယ်။
တစ်ခုခုက လိုနေ ပိုနေရင်၊ လိုတိုးပိုလျှော့လေးပေါ့ သတိလေးနဲ့ ညှိရတယ်။
သဒ္ဓါလွန်တော့ ညွတ်တယ် ဆိုတာကို အဖြစ်အပျက်လေးနဲ့ မ,ရောရော အောင် သမမွှေ၏။
နောက်ဆုံးစာကြောင်းကတော့ စာရေးသူသည် မိန်းမဖြစ်သော်ငြား (နိဒါန်း၌ မိန်းမပီပီ မည်သို့ပင် အငေါထူ ထားစေကာမူ နိဂုံး၌) သတိတရား လက်ကိုင်ထား၍ ပညာလည်း မတောက်တခေါက် ရှိကြောင်း အဖတ်ဆယ် လိုက်ပါတယ်။
(အား..နေဦး ရော, သမမွှေလိုက်ပုံလေး ပြည့်စုံသွားအောင်)
post တင်ခွင့်ရပြီးဆိုတော့ ခေါင်းစဉ် ဘယ်လိုတပ်ရမလဲလို့ ရောလေရာ ထိုအနှီ ယောက်ျားသည် အထက်ပါ ခေါင်းစဉ်ကို ပေးလိုက်ရာ ဤအကြင် မိန်းမမှာ ၀မ်းမြောက် ၀မ်းသာစွာဖြင့် သဘောတူ၍ အသင်တို့ မျက်မှောက် ဦးနှောက်ခြောက်ရန် ရောက်လေသတည်း။
လူအဖွဲ့အစည်းတစ်ခု၏ ငြိမ်းချမ်းသာယာရေးကို စည်းလုံး ညီညွတ်မှုကသာ ဖော်ဆောင်နိုင်သည်။ စည်းလုံး ညီညွတ်မှုကိုလည်း ဆွေးနွေးခြင်း၊ ညှိနှိုင်းခြင်း၊ ရိုးသားပွင့်လင်းစွာ အပြန်အလှန် ဝေဖန် ထောက်ပြခြင်းတို့ဖြင့် တည်ဆောက်ရသည်။ ထို့ကြောင့် ငြိမ်းချမ်းသာယာသော လူ့ဘောင်ကို ဖန်တီးရန်အတွက် ရိုးသားပွင်းလင်းစွာ ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းနိုင်သော, ဝေဖန် ပြုပြင်နိုင်သော အခြေခံအဆောက်အအုံကို ဦးစွာ တည်ဆောက်ရပေမည်။
သံဃာ အဖွဲ့အစည်း၏ ငြိမ်းချမ်းစွာ နေထိုင်ရေးအတွက် ထိုအခြေခံအုတ်မြစ်ကို တည်ဆောက်ရန် ဗုဒ္ဓမြတ်စွာသည် ၀ိနည်းတော်ဟူသော စည်းကမ်းဥပဒေကို ပညတ်တော်မူခဲ့သည်။ သီတင်းကျွတ်လပြည့်နေ့တွင် ရဟန်းသံဃာတို့ ပ၀ါရဏာပြုခြင်းသည် သံဃာအဖွဲ့အစည်း၏ အခြေခံဥပဒေမှ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းတရပ်ပင် ဖြစ်သည်။
မြတ်စွာဘုရား လက်ထက်တော်အခါက များစွာသော ရဟန်းတော်တို့သည်ကောသလတိုင်း၊ နယ်ကျောင်းတစ်ကျောင်း၌ ၀ါဆိုတော်မူကြ၏။ ထိုရဟန်းတော်တို့သည် ငြင်းခုံခြင်း၊ ၀ါဒကွဲပြားခြင်းသည် စကားပြောဆိုခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်ဟု ယူဆကြသည်။ ထို့ကြောင့် တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး အငြင်းမပွားရပဲ၊ ညီညွတ်ချမ်းသာစွာ နေထိုင်နိုင်ရန်အတွက် စကားမပြောပဲ နေထိုင်ကြရန် သဘောတူကြ၏။ တစ်ဝါတွင်းလုံး စကားမပြောကြပဲ လက်ဟန် ခြေဟန်ဖြင့်သာ သန့်ရှင်းရေးလုပ်ခြင်း၊ သောက်ရေသုံးရေတို့ ခပ်ခြင်း, လဲခြင်း၊ ဆွမ်းအတွက်ပြင်ဆင်ခြင်းစသော အမှုကိစ္စတို့ကို ဆောင်ရွက်နေခဲ့ကြသည်။ ၀ါကျွတ်သောအခါ မြတ်စွာဘုရားရှိရာ ဇေတ၀န်ကျောင်းတော်သို့ ဘုရားဖူးရန် ထွက်ခဲ့ကြသည်။
မြတ်စွာဘုရားသည် ထိုရဟန်းတော်တို့အား “ကျန်းမာကြပါလော။ အငြင်းအခုံမရှိ, ညီညီညွတ်ညွတ် ချမ်းချမ်းသာသာ ရှိပါ၏လော။ ဆွမ်းအတွက် မပင်မပန်းရှိပါ၏လော” ဟုမေး၏။ ဘုရားရှင်တို့ မည်သည် မသိ၍ မေးခြင်းမဟုတ်။ အကျိုးအတွက် ရည်မျှော်၍ မေးခြင်းသာ ဖြစ်သည်။ ရဟန်းတော်တို့ကလည်း မိမိတို့သည် ကျန်းမာကြကြောင်း၊ ဆွမ်းအတွက် မပင်ပန်းကြရကြောင်းနှင့်တကွ စကားမပြောပဲ ညီညွတ်ချမ်းသာစွာ နေထိုင်ခဲ့ကြပုံတို့ကို ပြန်လည် လျှောက်ထား၏။
စကားမပြောပဲနေခြင်းကို ဗုဒ္ဓမြတ်စွာက မချီးမွမ်း။ “သင်တို့သည် မချမ်းသာပဲလျှက် ချမ်းသာစွာနေရသည်ဟု ဆိုကြ၏”ဟု အပြစ်တင် လေသည်။ စကားမပြောပဲနေခြင်းအား နွား၊ ဆိတ်တို့ကဲသို့ တိရစ္ဆာန်တို့၏ နေခြင်းဟု ကဲ့ရဲ့ရှုတ်ချ၏။ တိတ္ထိတို့၏ ‘မူဂဗ္ဗတ’ ခေါ် စကားမပြော, တုံဏိဘာဝေဆိတ်ဆိတ်နေသော အကျင့်မျိုးကို ကျင့်၏ ဟုကဲ့ရဲ့ရှုတ်ခြ၏။ ရဟန်းတို့သည် ဤသို့ စကားမပြောသော အကျင့်ကို မကျင့်အပ်။ ကျင့်ပါက ဒုက္ကအာပါတ် အပြစ်သင့်သည်ဟု ပညတ်တော်မူသည်။ စကားမပြောသော လူ့အဖွဲ့အစည်းသည် တိရစ္ဆာန်အုပ်တို့နှင့် မခြားတော့သော အန္တရာယ်ကြောင့် ဖြစ်သည်။
ထိုသို ရှောင်ကြဉ်ရန်အချက်ကို ပြဋ္ဌာန်းတော်မူပြီးနောက်၊ ဆောင်ရန်အတွက် ပ၀ါရဏာပြုခြင်း ၀ိနည်းကံကို ပညတ်တော်မူခဲ့သည်။ ၀ိနည်းကံဟူသည် သံဃာအဖွဲ့အစည်း၏ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းဖြစ်သည်။ ‘ပ၀ါရဏာ’ သည် ‘ဖိတ်ကြားခြင်း’ဟု အဓိပ္ပါယ်ရသည်။ မိမိ၏ ချို့ယွင်းချက် အပြစ်များအား မြင်လျှင်ဖြစ်စေ၊ ကြားလျှင်ဖြစ်စေ၊ သံသယရှိလျှင်ဖြစ်စေ ဝေဖန်ညွှန်ပြကြပါရန် ဖိတ်ခေါ်ခြင်း ဖြစ်သည်။
ရဟန်းတော်တို့သည် သီတင်းကျွတ်လပြည့် ပ၀ါရဏာနေ့တွင် “သုဏာတု မေ ဘန္တေ သံဃော” အစချီကာ အောက်ပါအတိုင်း သုံးကြိမ်တိုင်တိုင် ဖိတ်ခေါ်၍ ပ၀ါရဏာပြုရသည်။
“သံဃံ, အာဝုသော, ပ၀ါရေမိ ဒိဋ္ဌေန ၀ါ သုတေန ၀ါ ပရိသင်္ကာယ ၀ါ။ ၀ဒန္တု မံ အာယသ္မာတော အနုကမ္ပံ ဥပါဒါယ။ ပဿန္တော ပဋိကရိဿာမိ။”
“ငါ့ရှင်တို့ … သံဃာအား ဖိတ်ကြားပါ၏။ မြင်လျှင်ဖြစ်စေ၊ ကြားလျှင်ဖြစ်စေ၊ သံသယရှိလျှင် ဖြစ်စေ အရှင်တို့သည် အကျွန်ုပ်အား အစဉ်သနားသောအားဖြင့် ပြောဆိုကြပါကုန်လော့။ (အပြစ်ကို) မြင်သည်ရှိသော် ကုစားပါအံ့။”
ဗုဒ္ဓသည် ရဟန်းတော်တို့အားသာ ပ၀ါရဏာပြုစေသည်မဟုတ်ပဲ၊ မိမိကိုယ်တော်တိုင်၏ ကိုယ်အမူအရာ၊ နှုတ်အမူအရာအား ကဲ့ရဲ့အပြစ်တင်စရာရှိက ဝေဖန်ရန် သံဃာတော်တို့အား ဖိတ်ကြားတော်မူလေ့ရှိသည်။
ထိုသို့ဖိတ်ခေါ်ခြင်းဖြင့် (၁) အချင်းချင်း မဆန့်ကျင်ပဲ လိုက်လျောညီထွေ ဖြစ်စေသည် (အညမညာနုလောမတာ)။ ရိုးသားပွင့်လင်းမှုကို အခြေခံ၍ အပြုသဘောဖြင့် ဝေဖန်ကြသလို၊ အဝေဖန်ခံရသုတို့က ရိုးသားဖြောင့်မတ်စွာ အချိန်မီ အပြစ်ကို ကုစားနိုင်သည်။ (၂) ထို့ကြောင့်ပင် အပြစ်မှ ကင်းလွတ်နိုင်ကြသည် (အာပတ္တိဝုဋ္ဌာနတာ)။ (၃) စည်းကမ်းဥပဒေအား ရှေ့တန်းတင် အလေးထားရာရောက်သည် (၀ိနယပုရေက္ခတာ)။ ဤအချက်သုံးပါးသည် ဗုဒ္ဓမြတ်စွာ ညွှန်ပြသော ပ၀ါရဏာပြုခြင်း၏ အကျိုးကျေးဇူး သုံးပါးပင်ဖြစ်သည်။
ရိုးသား ပွင့်လင်းစွာ ဝေဖန်ရေးကိုအခြေခံ၍ အဖွဲ့အစည်း အတွင်းညီညွတ်မှုရစေရန်၊ ချို့ယွင်းချက်များကို အချိန်မီ ပြုပြင်နိုင်ရန်၊ ဥပဒေကို လေးစား ရှေ့တန်းတင်သော အဖွဲ့အစည်းတစ်ရပ်ဖြစ်စေရန် ချမှတ်တော်မူခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
၁။ ၀ိနည်း မဟာဝဂ်၊ ပ၀ါရဏာက္ခန္ဓက
၂။ သဂ္ဂါထာဝဂ္ဂသံယုတ်ပါဠိတော်၊ ၈-၀င်္ကီသသံယုတ်၊ ၇-ပ၀ါရဏာသုတ္တံ (သံ-၁-၂၁၅)
ဗုဒ္ဓမြတ်စွာ ပရိနိဗ္ဗာန်ပြုတော်မူပြီးနောက် ပထမသံဂါယနာ တင်သောအခါ ၄၅-နှစ်တာကာလ ဟောကြားတော်မူခဲ့သော ဒေသနာတော်တို့အား ၀ိနည်း, သုတ္တန်, အဘိဓမ္မာဟု အစုသုံးစု ပြု၍ မထေရ်အစဉ် အဆက်တို့ ပို့ချသင်ယူ ထိန်းသိမ်း စောင့်ရှောက်တော် မူခဲ့ကြသည်။ ၀ိနည်းနှင့် သုတ္တန်ဒေသနာတို့သည် နာကြားမည့် လူပုဂ္ဂိုလ် စရိုက်အလိုက် ပရိယာယ်ဖြင့် ဆောင်၍ ဟောကြားတော်မူခဲ့ပြီး၊ အဘိဓမ္မာဒေသနာကိုမူ ပုဂ္ဂိုလ်မငဲ့၊ ပရိယာယ်မဆောင်ပဲ အဓိပ္ပါယ်ကို တိုက်ရိုက် (နိတတ္ထ) ဟောကြားထားခြင်း ဖြစ်သည်။
အဘိဓမ္မာသည် “မြင်, ကြား, နံ, စား, ထိ, သိ” ဟူသော သိမှုအတွေ့အကြုံ (experience) အား အရှိကို အရှိအတိုင်း ရှုမြင်သုံးသပ်ခြင်းပင် ဖြစ်သည်။ ပုထုဇဉ်တို့သည် ထိုသိမှုအတွေ့အကြုံကို အတ္တရှုထောင့်မှ ရှုမြင်သည်။ ဗုဒ္ဓမြတ်စွာက အနတ္တရှုထောင့်မှ ရှုမြင်သည်။ အဘိဓမ္မာဒေသနာသည် အနတ္တရှုထောင့်မှ ရှုမြင်နိုင်ရန် အတွေ့အကြုံတို့အား ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ၍ ပြသည်။ ထို့နောက် ထိုတရားတို့ မည်သို့ အကြောင်းအကျိုး ဆက်နွယ်မှီတွယ်နေပုံကို ဟောကြားသည်။ အတွေ့အကြုံအား ခန္ဓာ ၅-ပါးအဖြစ် ခွဲကြည့်သည်။ အာယတန ၁၂-ပါးအဖြစ်ခွဲကြည့်သည်။ ဓာတ် ၁၈-ပါးအဖြင့် ခွဲကြည့်သည်။ ထို့နောက် ထို ခန္ဓာ၊ အာယတန၊ ဓာတ်တို့ အချင်းချင်း အပြန်အလှန်မှီ၍နေပုံ ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ကိုလည်းပြသည်။ ပဋ္ဌာန်းဒေသနာကိုလည်း ဟောကြားပြသသည်။ အချုပ်အားဖြင့် “သဗ္ဗေ ဓမ္မာ အနတ္တာ” ကို ဟောကြားခြင်းဖြစ်သည်။
၂။ ၀ိဘင်္ဂ (၀ိဘင်း)
၄။ ပုဂ္ဂလပညတ္တိ (ပုဂ္ဂလပညတ်)
၆။ ယမက (ယမိုက်)
၇။ ပဋ္ဌာန (ပဋ္ဌာန်း)
ဓမ္မသင်္ဂဏီကျမ်းသည် အဘိဓမ္မာကျမ်းရင်း ပါဠိတော် ၇-ကျမ်းတွင် ပထမဆုံးသော ကျမ်းဖြစ်သည်။ ဓမ္မသင်္ဂဏီဟူသော အမည်သည် “ဓမ္မတို့ကို ရေတွက်၍ ပြသောကျမ်း” (Enumeration of Phenomena) ဟု အဓိပ္ပါယ်ရသည်။ ပရမတ္ထခေါ် အတွေ့အကြုံဘ၀မှ အစစ်မှန်တရားတို့အား “မာတိကာ”ခေါ် ဇယားချ၍ အုပ်စုဖွဲ့ ရေတွက်ပြသော ကျမ်းဖြစ်သည်။ သဘောတူရာ တူရာအုပ်စုဖွဲ့၍ သုံးစုစီဖွဲ့ထားသော တိကမာတိကာ (တိက် - Traids) အစု ၂၂ စုနှင့် နှစ်စုစီ အုပ်စုဖွဲ့သော ဒုကမာတိက (ဒုက် - Dyads) အစု ၁၀၀ ရှိသည်။ ဥပမာအားဖြင့် ကုသလတိက်ဟုဆိုလျှင် ကုသိုလ်အုပ်စု၊ အကုသိုလ်အုပ်စုနှင့် (အကုသိုလ်အကုသိုလ်ဟု ပြောမရသော) အဗျာကတအုပ်စုဟု သုံးအုပ်စု ခွဲပြခြင်းဖြစ်သည်။ ဟေတုဒုက်ဟုဆိုလျှင် ဟေတုခေါ် ဟိတ်တရားများအုပ်စုနှင့် အဟေတုကခေါ် ဟိတ်မဟုတ်သော တရားများအုပ်စုဟု နှစ်စုပြု၍ ပြသည်။
ဓမ္မသင်္ဂဏီ၏ ပထမဆုံးအခန်းမှာ စိတ္တုပ္ပါဒကဏ္ဍ ဖြစ်သည်။ စိတ်ဖြစ်ပေါ်ပုံပြသော အခန်းဖြစ်သည်။ စိတ်ဖြစ်သောအခါ စိတ်နှင့်အတူ စေတသိက်တရားတို့တွဲဖြစ်ကြသည်။ မည်သည့်စိတ်ဖြစ်သောအခါ မည်သည့် စေတသိက်တို့တွဲ၍ ဖြစ်သည်ကို ပြသည်။ ထို့နောက် ဒုတိယအခန်းဖြစ်သော ရူပကဏ္ဍတွင် ရုပ်တရားတို့အကြောင်းကို ဖော်ပြသည်။ တတိယအခန်း နိက္ခေပကဏ္ဍတွင် အဘိဓမ္မာနှင့် သုတ္တန်ဒေသနာတို့မှ တိက၊ ဒုက မာတိကာအားလုံးတို့အား အကျဉ်းအားဖြင့် ပြထားသည်။ နောက်ဆုံး အဋ္ဌကထာကဏ္ဍတွင် သုတ္တန္တမာတိကာများကို ချန်လှပ်ပြီး အဘိဓမ္မာမာတိကာများကိုသာ ကျက်မှတ်ရ လွယ်စေရန်အတွက် ပို၍ အကျဉ်းခြုံး ဖော်ပြထားသည်။
ဒုတိယကျမ်းဖြစ်သော အဘိဓမ္မာဝိဘင်းကျမ်း (Book of Analysis) သည် အခန်း ၁၈-ခန်းဖွဲ့၍ အသေးစိတ် ပိုင်းခြားဝေဖန်၍ ဟောကြားထားသော ကျမ်းဖြစ်သည်။ အခန်း ၁၈-ခန်းမှာ ခန္ဓာ, အာယတန, ဓာတု, သစ္စ, ဣနြ္ဒိယ, ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ, သတိပဋ္ဌာန, သမ္ပပဓာန, ဣဒ္ဓိပါဒ, ဗောဇ္ဈင်္ဂ, မဂ္ဂင်္ဂ, ဈာန, အပ္ပမညာ, သိက္ခာပဒ, ပဋိသမ္ဘိဒါ, ဉာဏ, ခုဒ္ဒက၀တ္ထု, ဓမ္မဟဒယ တို့ဖြစ်သည်။
အခန်း ၁၄-ခန်းရှိသော ဓာတုကထာကျမ်း (Discourse on Elements)သည် ရှေ့နှစ်ကျမ်းဖြစ်သော ဓမ္မသင်္ဂဏီနှင့် ၀ိဘင်းကျမ်းတို့တွင် ဖော်ပြခဲ့သော တိကနှင် ဒုကမာတိကာတို့အား “ခန္ဓာ၊ အာယတန၊ ဓာတ်” သုံးစုတွင် မည်သို့အကျုံးဝင်သည်၊ မ၀င်သည်ကို ဆက်စပ်ပြထားသော ကျမ်းဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ကျမ်းငယ် တစ်ဆူသာဖြစ်သော်လည်း ရှေ့နှစ်ကျမ်းနှင့် တွဲဖက်လေ့လာရမည့် ကျမ်းဖြစ်သည်။
အဘိဓမ္မာသည် ပရမတ္ထဒေသနာဟုဆိုရသော်လည်း ပညတ်ဝေါဟာရများမပါပဲ ဟောကြား၍မရ။ ပညတ်ဟုဆိုရာတွင် စိတ်, စေတသိက်စသော အစစ်အမှန် ရှိသောတရားတို့အား အမည်ပေး ခေါ်ဝေါ်ထားသော ၀ိဇ္ဇမာနပညတ်နှင့် “ယောက်ျား, မိန်မ, ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တ၀ါ” စသည်တို့ကဲ့သို့ အစစ်မှန်အားဖြင့်မရှိပဲ စိတ်အထင်ဖြင့် ကြံဆ ခေါ်ဝေါ်ထားသော အ၀ိဇ္ဇမာနပညတ်ဟူ၍ နှစ်မျိုးရှိသည်။ ပုဂ္ဂလပညတ် (Concepts of Individuals) သည် အခြားအဘိဓမ္မာကျမ်းများနှင့် မတူပဲ၊ ပရမတ္ထတရားတို့အစား ပညတ်ဝေါဟာရတို့အား လေ့လာသည်။ အခန်း ၁၀-ခန်းခွဲခြား၍ ပုဂ္ဂိုလ် အမျိုးစားများအား အသေးစိတ်ခွဲခြား ပြထား၏။
ကထာဝတ္ထု (Point of Controversy) သည်လည်း ပုဂ္ဂလပညတ်ကျမ်းကဲ့သို့ပင် အခြားသော အဘိဓမ္မာကျမ်းများနှင့် မတူသော ကျမ်းဖြစ်သည်။ မြတ်စွာဘုရားပရိနိဗ္ဗာန်စံပြီး ၂၁၈-နှစ်အကြာ၊ အသောကမင်းလက်ထက် တတိယသံဂါယနာတင်စဉ်တွင် ရှင်မောဂ္ဂလိပုတ္တတိဿမထေရ် ထည့်သွင်းဟောကြားခဲ့သောကျမ်းဖြစ်သည်။ ဘုရားဟောဒေသနာတို့မှ ပုဂ္ဂိုလ်၊ သတ္တ၀ါ၊ အတ္တစသော သဘောတရားတို့အပေါ်တွင် အဓိပ္ပါယ်ကောက်ယူပုံ ကွဲလွဲနေသည်များအား ဖြေရှင်းရန် စကားရည်လုသကဲ့သို့ အချေအတင် မေးဖြေထားသော စကားပြောပုံစံဖြင့် ဟောကြားထားသော ကျမ်းဖြစ်သည်။
ယမိုက်ကျမ်း (Books of Pairs) သည် အဘိဓမ္မာဝေါဟာရတို့၏ အဓိပ္ပါယ် သတ်မှတ်ချက်ကို ပို၍ သေချာတိကျစေရန်၊ အစုံ, အစုံအားဖြင့် အမေးအဖြေပြု၍ ဟောကြားထားသည်။ ဥပမာအားဖြင့် “ကုသလဓမ္မအားလုံးတို့သည် ကုသလမူလဖြစ်သလော၊ သို့တည်းမဟုတ် ကုသလမူလအားလုံးတို့သည် ကုသလဓမ္မဖြစ်သလော” စသဖြင့် အစုံပြု၍ မေးဖြေထားသည်။ မူလ, ခန္ဓာ, အာယတန, ဓာတ်, သစ္စာ, သင်္ခါရ, အနုသယ, စိတ္တ, ဓမ္မ, ဣန္ဒြိယဟူ၍ ယမိုက် ၁၀-ကျမ်းရှိသည်။
ရှေ့ကျမ်းတို့တွင် တိကမာတိကာ, ဒုကမာတိကာတို့အား အုပ်စုဖွဲ့ ရေတွက်ပြခြင်း၊ ခန္ဓာ, အာယတန, ဓာတ်စသော အုပ်စုများတွင် သွင်း၍ ပြခြင်း၊ အသေးစိတ် ပိုင်းခြားဝေဖန်ပြခြင်း၊ တရားတစ်ပါးနှင့် ရောယှက်ခြင်းမရှိစေပဲ အဓိပ္ပါယ် ပိုမိုတိကျစေရန် သတ်မှတ်ပေးခြင်း စသဖြင့်လေ့လာခဲ့သည်။ နောက်ဆုံးကျမ်းဖြစ်သော ပဋ္ဌာန်းကျမ်း (Books of Conditional Relations) တွင် “ထိုတရားတို့သည် မိမိတို့ သဘာဝအလျှောက် သီးခြားရပ်တည်ဖြစ်ပေါ်နိုင် စွမ်းမရှိ။ အကြောင်း အထောက်အပံ့ အမျိုးမျိုးတို့ပေါ် မှီတည်၍ ဖြစ်ပေါ်ရပုံ” ကိုဟောကြားသည်။ တရားတို့ အချင်းချင်း ဆက်စပ် ထောက်ပံ့နေပုံအား ပစ္စည်း (ပစ္စယ - Conditions) ၂၄-မျိုးဖြင့် ဟောကြားထားသည်။ အခန်းကဏ္ဍအားဖြင့် (၁) အနုလောမ (positive method) (၂) ပစ္စနီယ (negative method) (၃) အနုလောမ ပစ္စနီယ (positive-negative) (၄) ပစ္စနီယ အနုလောမ (negative-positive methid) ဟုလေးခန်းရှိသည်။ ကဏ္ဍတစ်ခုတွင် အခန်းငယ် ၆-ခန်းစီပါ၍ စုစုပေါင်း အခန်း ၂၄-ခန်းရှိသည်။ အုပ်ရေအားဖြင့် ၅-အုပ် စာမျက်နှာအားဖြင့် ၂၅၀၀ မျှ အရွယ်အစား ရှိယုံသာမက နားလည်ရန်လည်း ခက်ခဲလှသဖြင့် “ကျမ်းကြီး-ပဋ္ဌာန်း ကျမ်းငယ်-ဆန်း”ဟု စာချိုးရသော ကျမ်းဖြစ်သည်။
ထိုသို့ ကြီးမားကျယ်ပြန့်သော အဘိဓမ္မာဒေသနာတော်ကြီး၏ အဓိပ္ပါယ်ကို နားလည်စေနိုင်ရန် အတွက် ခေတ်အဆက်ဆက် အနက်ဖွင့်ကျမ်းများ ရေးသားပြုစုခဲ့ကြသည်။ ပါဠိတော်တို့၏ အနက်အဓိပ္ပါယ်ကို ဖွင့်ပြသောကျမ်းတို့အား အဋ္ဌကထာ (Commentary) ဟုခေါ်သည်။ သာသနာသက္ကရာဇ် ၉၇၃-ခုနှစ် (တတိယသံဂါယနာတင်ပြီး အနှစ် ၇၀၀-ကြာ)တွင် ပေါ်ထွန်းခဲ့သော အရှင်မဟာဗုဒ္ဓဃောသသည် အလွန်ထင်ရှားသော အဋ္ဌကထာဆရာ တစ်ပါးဖြစ်သည်။ သီဟိုဠ်ဘာသာဖြင့်ရှိနေသော ရှေးအဖွင့်ကျမ်းများအား မှီး၍ ဘုရားဟော ဒေသနာ အားလုံးနီးပါးတို့၏ အဋ္ဌကထာကျမ်းသစ်များကို ပြုစုခဲ့သော မထေရ်ဖြစ်သည်။ အရှင်မဟာဗုဒ္ဓဃောသသည် ဓမ္မသင်္ဂဏီကျမ်းအဖွင့် အဋ္ဌသာလိနီ (The Expositor), ၀ိဘင်းကျမ်းအဖွင့် သမ္မောဟ၀ိနောဒနီ (The Dispeller of Delusion) နှင့် ကျန်သော အဘိဓမ္မာ ၅-ကျမ်းတို့၏ အဖွင့် ပဉ္စပကာရဏ အဋ္ဌကထာ (Commentary of five treatises) ဟူသော အဋ္ဌကထာ သုံးကျမ်းအားပြုစုခဲ့သည်။
ထို့နောက် ယင်းအဋ္ဌကထာသုံးကျမ်းမှ ခက်ခဲသောအပိုင်းတို့ကို ထပ်မံဖွင့်သော ဋီကာကျမ်းများကို အရှင်အာနန္ဒ မထေရ်က ပြုစုခဲ့သည်။ မူလဋီကာ (Original sub-commentaries) ဟုခေါ်သည်။ အရှင်အာနန္ဒ၏ တပည့် အရှင်ဓမ္မပါလ မထေရ်က တစ်ဖန်ထပ်မံ၍ အဖွင့်ကျမ်းများရေးသားခဲ့ရာ အနုဋီကာ ဟုအမည်တွင်သည်။
ယခုဖော်ပြခဲ့သော အဋ္ဌကထာ၊ ဋီကာကျမ်းများသည် အဘိဓမ္မာပါဠိတော်ကြီးများ၏ အစဉ်အတိုင်း အနက်အဓိပ္ပါယ်, ပုဒ်ပါဌ်တို့ကို ဖွင့်ပြသောကျမ်းများဖြစ်၏။ မူလကပင် ကြီးမားကျယ်ပြန့်သော ဒေသနာတော်ကြီးအား အဋ္ဌကထာ၊ ဋီကာများဖြင့် ထပ်မံလေ့လာရန်သည် စာသင်သားငယ်တို့အတွက် မလွယ်ကူလှ။ ထို့ကြောင့် နောင်တွင် အဘိဓမ္မာ ၇-ကျမ်းလုံးနှင့် အဖွင့်အဋ္ဌကထာ၊ ဋီကာတို့မှ အနက်အဓိပ္ပါယ်တို့ကို အကျဉ်းခြုံး ခြုံငုံ၍ ရေးသားပြုစုသော ကျမ်းငယ်များပေါ်ထွန်းလာခဲ့သည်။ ထိုကျမ်းတို့အား လက်သန်းသဖွယ် သေးငယ်၍ လက်သန်းအဋ္ဌကထာများ ဟုခေါ်သည်။ (အကျဉ်း မှတ်ဖွယ်မျှသာ ဆိုသဖြင့် လက္ခဏ ဟုခေါ်ရာမှ၊ လက္ခန် > လက်သန်း ဖြစ်သွားသည် ဟုလည်းဆိုကြသည်။)
အရှင်ဗုဒ္ဓဃောသလက်ထက်ကပင် ခေတ်ပြိုင်အဋ္ဌကထာဆရာ တစ်ပါးဖြစ်သော အရှင်ဗုဒ္ဓဒတ္တမထေရ်သည် အဘိဓမ္မာဝတာရ (An Approach to Abhidhamma) နှင့် ရူပါရူပ၀ိဘာဂ (Analysis of Matter and Mind) အမည်ရှိ အဘိဓမ္မာ လက်သန်း အဋ္ဌကထာကျမ်းငယ်နှစ်ဆူ ရေးသား ပြုစုခဲ့ဖူးသည်။ ထိုသို့သော အဘိဓမ္မာ လက်သန်း အဋ္ဌကထာများအနက် အရှင်အနုရုဒ္ဓမထေရ်ပြုစုသော အဘိဓမ္မတ္ထသင်္ဂဟကျမ်း (Compendium of Abhidhamma) သည် အထင်ရှားဆုံးဖြစ်သည်။ ‘သင်္ဂဟ’ အား မြန်မာမှုပြု၍ ‘သင်္ဂြိုဟ်’ကျမ်းဟု ခေါ်ဝေါ်ကြသည်။
ဤကျမ်းငယ်လေးအား သင်္ဂြိုဟ် ၉-ပိုင်းခေါ် အောက်ပါ အခန်း ၉-ခန်းဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသည်။
၁။ စိတ္တပရိစ္ဆေဒ (စိတ်ပိုင်း)- စိတ် အကျဉ်း ၈၉-ပါး၊ အကျယ် ၁၂၁-ပါးကို ပြသော အခန်း
၂။ စေတသိကပရိစ္ဆေဒ (စေတသိက်ပိုင်း) - စေတသိက် ၅၂-ပါးနှင့် စိတ်-စေတသိက်တို့ယှဉ်ပုံပြသော အခန်း
၃။ ပကိဏ္ဏကပရိစ္ဆေဒ (ပကိဏ်းပိုင်း) - စိတ်, စေတသိက်တို့ကို ဝေဒနာ, ဟိတ်, ကိစ္စ, ဒွါရ, အာရုံ, ၀တ္ထုအားဖြင့် အထွေထွေ အလီလီ ခွဲခြားဝေဖန်ပြသော အခန်း
၄။ ၀ီထိပရိစ္ဆေဒ (၀ီထိပိုင်း) - ဒွါရခြောက်ပါးတွင် ၀ီထိ (mental process) ခေါ် သိစိတ်အစဉ်တို့ဖြစ်ပေါ်ပုံ စိတ္တနိယာမကို ပြသောအခန်း
၅။ ၀ီထိမုတ္တပရိစ္ဆေဒ (၀ီထိမုတ်ပိုင်း) – ရှေ့အခန်းတွင်ပြခဲ့သော ၀ီထိတို့မှ လွတ်နေသော ဘ၀င်, စုတိ, ပဋိသန္ဓေအခိုက်တို့၌ စိတ်အစဉ်ဖြစ်ပုံ ပြသော အခန်း
၆။ ရူပပရိစ္ဆေဒ (ရုပ်ပိုင်း) - ရုပ် ၂၈-ပါး၊ ရုပ်ဖြစ်ပုံ၊ ရုပ်အစဉ်နှင့် နိဗ္ဗာန်အကြောင်းတို့ကို ဖော်ပြသော အခန်း
၇။ သမုစ္စယပရိစ္ဆေဒ (သမုတ်စည်းပိုင်း) - စိတ်, စေတသိက်, ရုပ်, နိဗ္ဗာန်တို့အား အဘိဓမ္မာကျမ်းကြီးများတွင်ကဲ့သို့ ခန္ဓာ, အာယတန, ဓာတ်စသဖြင့် အုပ်စုဖွဲ့စည်းပြသော အခန်း
၈။ ပစ္စယပရိစ္ဆေဒ (ပစ္စည်းပိုင်း) - အကြောင်းအကျိုးဆက်နွယ်ပုံတို့ကို ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်နည်း၊ ပဋ္ဌာန်းနည်းဖြင့် ပြသော အခန်း
၉။ ကမ္မဋ္ဌာနပရိစ္ဆေဒ (ကမ္မဋ္ဌာန်းပိုင်း) - သမထ, ၀ိပဿနာကမ္မဋ္ဌာန်းတို့ကို ပြသော အခန်း
အဘိဓမ္မာပါဠိတော်၊ အဋ္ဌကထာကြီးများအား မလေ့လာမီ၊ အဘိဓမ္မာ အခြေခံရစေရန် သင်္ဂြိုဟ်ကို လေ့လာကြရသည်။ သင်္ဂြိုဟ်ကျမ်းတွင် ပါဠိတော်ကြီးများတွင်ကဲ့သို့ တိကမာတိကာ, ဒုကမာတိကာများဖြင့် ခွဲခြားပြမနေတော့ပဲ “အဘိဓမ္မာတွင် စိတ်, စေတသိက်, ရုပ်, နိဗ္ဗာန်”ဟူသော ပရမတ္ထအပြားလေးပါးရှိသည်” စသဖြင့် အကျဉ်းအားဖြင့် ခြုံငုံဖော်ပြသဖြင့် စတင်လေ့လာသူတို့အတွက် လွယ်ကူစေသည်။ ထို့ကြောင့် သင်္ဂြိုဟ်ကျမ်းအား “အဘိဓမ္မာသင်ပုန်းကြီး” ဟုလည်း ခေါ်ဝေါ်ကြသည်။
၁။ လယ်တီပဏ္ဍိတဦးမောင်ကြီး - အဘိဓမ္မတ္ထမဉ္ဇရီ ခေါ် ပရမတ္ထသံခိပ်ဋီကာ (နိဒါန်းမှ ကောက်နှုတ်ချက်)
၂။ Bhikkhu Bodhi – A Comprehensive Manual of Abhidhamma : Translation of Abhidhamma Sangaha (extract from Introduction)
၃။ U Ko Lay – A Compendium of Buddhiam: Guide to Tipiṭaka
၄။ Dr. Nandamālā – Fundamental Abhidhamma Part I (extract from Introduction)
Labels: ဓမ္မဒါန, ဓမ္မမှတ်စု, အဘိဓမ္မာ, ဧရာ
သြော် အချစ်ဆိုတာ စိတ္တဇနာမ်လေးပါ။
telepathy, will power ဆိုတာတွေကို အလေးထားတတ်သူ တစ်ယောက်အတွက်တော့
သက်ဝေ ရေ ရေးလိုက်ပြီနော်။
Labels: tag post, သီတာ, အတွေးအမြင်
ဖတ်ဖူးတဲ့ ၀တ္တုတိုလေး တစ်ပုဒ်မှာပါ… ခေါင်းစဉ်၊ စာရေးသူတွေကိုတော့ မမှတ်မိတော့ပါဘူး။ သားဖြစ်သူကို ကျောင်းသွားကြိုရင်း မျက်စိရှေ့မှာတင် သားလေး ကားတိုက်ခံရပြီး သေဆုံးသွားရလေတဲ့ အဖြစ်ကြောင့် ယဉ်ယဉ်လေးရူးနေတဲ့ ရုပ်ရည်သန့်သန့် လူလတ်ပိုင်းအရွယ် အမျိုးသမီး တစ်ယောက် အကြောင်း ကို ကျောင်းနားက အကြော်သည် အဒေါ်ကြီးက ပြန်ပြောပြတဲ့ဟန်နဲ့ ရေးထားတာလေးပါ။ ကျောင်းဆင်းချိန်နီးရင် အဲ့ဒီ အမျိုးသမီးက ဘယ်ကနေဘယ်လိုရောက်လာမှန်း မသိဘူးတဲ့ သူ့အကြော်ဆိုင်ရောက်လာပြီး သူ့သားလေး အကြောင်းတွေ ပြောတော့တာပဲတဲ့။ အတာကလေ… အတာကလေ…နဲ့ပေါ့။ အကြော်သည် အဒေါ်ကြီးလည်း သူ့ကိုနာမည်လည်း မသိတော့ အတာတို့အမေ လို့ပဲခေါ်လိုက်တာပေ့ါ။ အဲဒီ အမျိုးသမီးကလေ သူ့ကို အတာတို့အမေ လို့ ခေါ်ပုံကို သိပ်ကို သဘောကျပုံရတယ် လို့ ၀တ္တုထဲမှာ ရေးထားပါတယ်။ (၀တ္တု အဆုံးသတ်ကို ကျမကောင်းကောင်း မှတ်မိနေသေးပေမဲ့ ဆက်မရေးပါရစေနဲ့တော့နော်။ ကျေကွဲဖွယ်နဲ့ အဆုံးသတ်ထားတယ်လို့သာ ကျေနပ်လိုက်ပါတော့)
ကျမ Celebration Children Day ဆိုတဲ့ post တင်ပြီးတော့ မမ Khin Oo May ရေးပေးတဲ့ Comment မှာ
ကျမကို Chrisတို့အမေ တဲ့…
ဖုံးလာရင် ရင်မော ရသလား c့hris တို့ အမေ.။ မလွယ်ပါလား။ ရုံးမှာ ဘောစ် နဲ့တွေ့ရသလိုပါဘဲလား။ တို.ထင်တာ ကတော. ကလေးစောင်ရှောက်တာ ရုံးထက် အများကြီး ပင် ပန်း တယ် ထင် တာ ဘဲ။။
October 5, 2008 1:10 AM
မမကတော့ ငိုချင်လျက်ကို လက်တို့ပါပြီ။ကျန်ခဲ့တဲ့ အပတ် ဥပုသ်နေ့ကပေ့ါ။ မမ တူ အကြောင်း တိုင်ရဦးမယ်။ (စပြီ၊ စပြီ၊ လေကြောင်းမိတော့မှာ ကြောက်ပြီး ထွက်မပြေးသွားနဲ့ဦးနော်။)
မမကမှာထားလို့ ၀ါတွင်းဥပုဉ်လေးတော့ ငါဖြစ်အောင် စောင့်မယ်ဟဲ့ ဆိုပြီးClementi ကျောင်းသွား ဥပုသ် ယူတယ်။ ချက်ချင်းထပြန်မဲ့ဟာကို အသိအစ်မ တစ်ယောက်က ထမင်းစားပြီးမှ ပြန်ပါဆိုလို့ အခြားဥပုသ်သည် သုံးလေးဆယ်လောက်နဲ့ ထမင်းဝင်စားတယ်ပေါ့။ အလှူရှင် တစ်ယောက်ကလည်း ဒန်ပေါက်လှူတာတဲ့။ စားနိုင်ရင်စားပါဆိုလို့ ဒန်ပေါက်ကို ထမင်းခပ်ဇွန်းကြီး တစ်ဇွန်းလောက် စားခဲ့ပါတယ်။ ပြီးတော့ ပန်းကန်တွေ ၀ိုင်းကူဆေးပြီး အချိုပွဲက ကျောက်ကျော စိမ်းစိမ်းလေးတွေ (အုန်းနို့တော့ နဲနဲပါတယ်) သုံးလေးတုံး ပါးစပ်ထဲ ကောက်ထည့်ပြီး အိမ်ပြန်ခဲ့တယ်။ ရထားပေါ်မှာတင် အခြေအနေက မဟန်တော့ဘူး ခေါင်းတွေ ကိုက်တာ။
အိမ်ရောက်ရောက်ချင်း သံပုရာရည်ဖျော်။ အမေ့အတွက်ဟာကို သူက မသောက်သေးဘူးဆိုတော့ သိမ်းပြီး (သြော် ယောက္ခမကြီးကတော့ ဘုန်းကြီးကျောင်းမှာ ကျန်ခဲ့သေးတယ်။) သံပုရာရည်ကိုသောက်။ ဟော သားတော်မောင် ကျောင်းကပြန်လာပါပြီ။ ဖိနပ်ချွတ်ရင်းပြောတယ်။ "မေမေ သားကျောင်းပြန်သွားရမယ်" တဲ့။ "ဘာဖြစ်လို့လဲ။" "သားကျန်ခဲ့တဲ့ အပတ်က Science ဖြေတာ ၂၀မှာ ၉မှတ်ပဲရလို့ ဆရာမက ပြန်သင်ပေးဖို့ ခေါ်တာ။" "ဒီနေ့ ကျူရှင်သွားရမယ် မဟုတ်လား။" "ကျူရှင်ဆရာမဆီ မလာနိုင်ကြောင်း message ပို့လိုက်တော့ မေမေ။" လုပ်ပြန်ပြီ။ သောကြာနေ့တုန်းကလည်း တရုတ်စာ အမှတ်နည်းလို့ ကျောင်းကဆရာမ ပြန်ခေါ်လို့ ကျူရှင်ဖျက်ထားရတယ်။ ဘယ်တတ်နိုင်မလဲ။ ကျူရှင်ဆရာမဆီ message ပို့တော့ message ပြန်လာတယ်။ ok ဘယ်unit ကိုတော့ အိမ်စာ လုပ်ထားပါပေ့ါ။
သားကတော့ ထမင်းစားပြီး ကျောင်းကို ပြန်ထွက်သွားပါပြီ။ ကိုယ်ကတော့ ခေါင်းတွေကိုက်လို့။ ညနေ ထမင်းစားချိန်ရောက်တော့ သူတို့နှစ်ယောက်ကို ထမင်းခွံ့ရသေးတယ်။ ယောင်ပြီး ကိုယ့်ပါးစပ်ထဲ တစ်လုပ်လောက် မထည့်လိုက်မိဖို့ သမာဓိ အကူအညီကို အပြင်းအထန် ယူထားရတဲ့ အစားငန်းတဲ့ ဥပုသ်သည်ရဲ့ ဖြစ်အင်။ ၅နှစ်သားငယ်ကို ခွံရတယ်ဆို ထားတော့ အဲ့ဒီ ၁၁နှစ်သားကလည်း ခွံ့ရတာပဲ။ ဒွက်ခဒွက်ခ ကိုယ့်အပူ ကိုယ်ရှာတာလေ နော်။ ထမင်းစားပြီးတော့ “သား အိမ်စာလုပ်။ ဆရာမ စာပေးထားတယ်” ပြောပြီး အိမ်ရှေ့ဝရံတာကို ထွက်ပြီး နေလိုက်တယ်။ သူတို့နားနေရင် အခြေအနေတွေက တစ်မျိုးမဟုတ် တစ်မျိုးနဲ့ တင်းမာလာနိုင်တယ်။
အိမ်ထဲပြန်ဝင်လာပြီး တော်တော်လေးနေတော့မှ TVရှေ့ရောက်နေပြီဖြစ်တဲ့ သားတော်မောင်ကို homework ပြီးပြီလားဆိုတော့ အင်း ဆိုလို့ စားပွဲပေါ်က စာအုပ်ကို ယူကြည့်လိုက်တော့ စာအုပ်ထဲမှာ ဟောင်းလောင်း အပေါက်တွေ။ ဥပုသ်သည် သိပ် သည်းမခံနိုင်တော့ဘူးပေါ့နော်။ စားပွဲပေါ်မှာလည်း စာရွက်တွေက ရှုပ်ပွ ဘောလ်ပင်တွေက ခေါင်းတခြား ကိုယ်တခြား။ အထဲက မှင်တံတောင် ဓားနဲ့ ပိုင်းဖြတ်ထားတာပါ ပါသေး။ မရတော့ဘူး မရတော့ဘူး လွှတ်ပြီ။ တင်ပြီ။ ဥပုသ်သည်တဲ့ ၀တ်ထားတဲ့ လုံချည်က ဒူးအထက်နားတက်ချင်နေပြီ။ ကလေးကို မ ရိုက်ဖို့ လှမ်းပြောနေကြတဲ့ သားရဲ့ အဖွား နှစ်ယောက်ကတော့ ကျမကို အရူးမ တစ်ယောက်လို ထိုင်ကြည့်နေကြလေရဲ့…ဟင်းးးးးးးးး
October 5, 2008 10:23 AM
အရူးမ မသီတာကို ခင်ကြတဲ့ မမKOM, ယုဝရီ, မေအောင်, မြတ်နိုး, သက်ဝေ, ဆောင်း, သိင်္ဂီ, တန်ခူး နဲ့ အားလုံးအတွက်
အဝေးအနွေး - အနီးအအေး
အပို မလို စကား
ငယ်ငယ်တုန်းက ရေဒီယိုဆိုတာ သိပ်ခင်စရာပါပဲ။
အိပ်ရေးအပျက်ခံနိုင်တယ် … သီချင်းသံကြားရင်။
ဒီလိုနေရင်းနဲ့ ရီကော်ဒါဆိုတာ ပေါ်လာပြန်တယ်။
ရေဒီယိုထက် သာနေတော့ … [Shell တီးဝိုင်းက အဆိုတော်တစ်ဦးရဲ့ သီချင်း]
သူလွှင့်ထုတ်တဲ့ အချိန်ကို စောင့်ဆိုင်း နားဆင်ရတဲ့ ရေဒီယို နဲ့စာတော့
ကိုယ် နားထောင်လိုတဲ့အရာကို အချိန်မရွေး စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ် နားဆင်နိုင်တယ်၊
ထပ်ပြန်တလဲ နားဆင်လို့ လည်း ရတယ်လေ ကက်ဆက် က…
ဟော…ရုပ်မြင်သံကြားဆိုတော့ သောတဆင်ဖို့ရန်သာမက အရုပ်လေးတွေလည်း တလှုပ်တုတ်တုတ် မြင်ရသေး။ ဓါတ်ပုံလို ရုပ်သေကြီး မဟုတ်ဘူးနော်…မိုက်တယ် ဒါပေမဲ့
ကိုယ် ကြည့်လိုတဲ့အရာကို အချိန်မရွေး စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ် ခံစားနိုင်တယ်၊
ထပ်ပြန်တလဲ ရှုစားလို့ လည်း ရတယ်လေ ဗွီဒီယို က…
စလောင်းလေးနဲ့ဆို Channel တွေ စုံလို့ Live Show တွေလည်း မလွတ်တော့ဘူး ကမ္ဘာတစ်ဝှန်းလုံး ကိုယ့်အိမ်က ထိုင်ကြည့်နေရသလို… အမိ။
Internet…, Internet…, ဟို သီချင်းထဲကလို
မင်းမရှိတဲ့ နေရာမှာ မနေနိုင်တာပေါ့ အချစ်ရယ်…ဆိုတာလို Online နဲ့ လား။ Archive တွေနဲ့လား။
Internet နဲ့ နှစ်ယောက် တကမ္ဘာတွေဖြစ်လို့ အခြား ကိုယ်နဲ့သက်ဆိုင်သောတွေကိုတောင် Internet နဲ့ ပူးပေးထားရတဲ့ အဖြစ်။ သိပ်ဟ မသွားစေလိုလို့ပါ။ ဥပမာလေးတွေ ပြပါဆိုရင်တော့
ရင်ကမွေးတဲ့ သားကလေ “မေမေ သားသား မေမေ့ ပေါင်ပေါ်မှာထိုင်ချင်လို့နော်တဲ့” (ကိုယ် Browse လို့ Explore နေပြီဆိုရင်ဖြင့် )
ထမင်းတစ်ဝိုင်းထဲ စားတဲ့ တူမလေးက “အန်တီတာ The curry chicken you cook is very nice.” တဲ့ GTalk က လှမ်း chat တာ
ဟိုတစ်ယောက်ကလည်း post မတင်သေးဘူးလား တင်တော့လေ တင်တော့…နဲ့
သြော် ခန္ဓာ့ အလိုလေးတွေ တတ်နိုင်သလောက် ဖြည့်ဆည်းပေးနေရတာပါ .. နော့
[ ရေဒီယိုတို့ ရုပ်မြင်သံကြားတို့က mass-media တွေ။ ကက်ဆက်, ဗီဒီယိုနဲ့ အင်တာနက်တွေ ကတော့ ကိုယ့်အကြိုက်ရွေးပြီး ကြည့်ရှုနားဆင်လို့ရတဲ့ de-massified media တွေတဲ့။ ]
အောက်တိုဘာလ ၁ ရက်နေ့က ကလေးများနေ့ပါ။ (ကျမတို့နိုင်ငံမှာတော့ ဗိုလ်ချုပ်မွေးနေ့ ဖေဖေါ်ဝါရီလ ၁၃ရက်နေ့ကို ကလေးများနေ့ အဖြစ်သတ်မှတ်ထားပါတယ်။)
စက်တင်ဘာလ ၂၄ရက် ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ နံနက်စောစော ၇နာရီ ၁၅မိနစ်လောက်မှာ အိမ်က ဖုန်းမြည်လာပါတယ်။ ကျမ ဖုန်းကိုင်လိုက်တော့ သားကြီး အတန်းပိုင်ဆရာမ ကျောင်းကနေ ဆက်တာပါ။ ဆရာမဆီက ဖုန်းလာရင် ကျမ ရင်မောရပါတယ်။ ဘာစာအုပ်ကျန်ခဲ့ပြန်ပါသလဲ? Hand-in လုပ်ဖို့ ဘယ် Assignment ပါမသွားပြန်ဘူးလဲ? Homework ကိုပြီးအောင်ရော လုပ်ထားရဲ့လား? တစ်သီကြီးတွေးပြီး အသင့်အနေအထားနဲ့ ဖုန်းကိုနားထောင်ရပါတယ်။ ကျမ ရင်ထဲက ကြိုတွေးနေတာတွေ တစ်ခုမှ မဟုတ်ခဲ့ပါဘူး။ သားတို့ အတန်းက ဒီနေ့မှာ Children Day Celebration လုပ်ဖို့အတွက် Singapore Science Centre ကို သွားမှာမို့ Parent Volunteer အဖြစ်လိုက်ခဲ့ဖို့ ခေါ်တာပါ။ ကျောင်းက ၈နာရီထွက်မှာမို့ ၇း၄၅နာရီ ကျောင်းကို ရောက်ရင်ရပါတယ်ဆိုလို့ သားငယ်ကို ကျောင်းပို့ဖို့ ပြင်ဆင်ပါတယ်။ သားငယ် ကျောင်းကားက ၇း၄၀နာရီ အိမ်ရှေ့လာခေါ်တာမို့ သားငယ်ကို ကျောင်းကားပေါ်တင်ပြီး သားကြီးကျောင်းကို ထွက်ခဲ့ပါတော့တယ်။
သားကြီးတို့ အတန်းမှာ ယောက်ျားလေး ၂၃ ယောက်နဲ့ မိန်းကလေး ၁၇ယောက် စုစုပေါင်း ၄၀ ရှိပါတယ်။ ကားလာတော့ အတန်းပိုင်ဆရာမနဲ့ ကျမ ကလေးတွေကို လူရေပြီးကားပေါ်တင်၊ ကားထွက်ပြီး လမ်းထိပ်ရောက်တော့ ကားကနာရီကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တယ်။ ၈း၀၂နာရီ။ ကျမရင်ထဲမှာ ဘာကိုသဘောကျသွားတယ် ဆိုတာ ကျမကိုယ်ကျမသိပါတယ်။ (ဟိုမစောင့်ရ၊ ဒီမစောင့်ရ၊ အချိန်တိကျ။)
ကလေးတွေကတော့ စိတ်လှုပ်ရှားပြီး တော်တော်လေး ပျော်နေကြပါတယ်။ တစ်ချို့တစ်လေပဲ သိပ်ပျော်ရွှင်တဲ့ဟန် မပြကြတာပါ။ အဲ့ဒီထဲမှာ ကျမ သားကြီး အပါအ၀င်ပေါ့။ သားကြီးကတော့ ကျမ ဒီခရီးမှာပါလာတာကလည်း တစ်ကြောင်း၊ နောက် သူ့စရိုက်ကိုကလည်း ရှက်ကိုးရှက်ကန်းနဲ့ မပွင့်တပွင့်။ ဖြေးဖြေးနဲ့ မှန်မှန်မောင်းလာတဲ့ ကားကြီးက မိနစ်၂၀၊ ၂၅ လောက်လည်း မောင်းမိရော အရှေ့ပိုင်းနားမှာ ထိုင်နေတဲ့ ကလေးတစ်ယောက် ကားမူးပြီး အန်ချပါတော့တယ်။ အဲ့ဒီနေ့က မိုးရွာနေတဲ့ အတွက် အိမ်ကယူလာတဲ့ ကျွတ်ကျွတ်အိတ်ထဲက ထီးရေစိုကိုထုတ်လိုက်ပြီး အိတ်ကို ကလေးလက်ထဲထည့် သူ့လက်က အညစ်အပေတွေကို တစ်ရှူးနဲ့ သုတ်ပေးရပါတယ်။ (ဒီကလေးက ကားမူးပြီး အန်တတ်တဲ့ အကျင့်ရှိကြောင်း ဆရာမက ပြောပြပါတယ်။) ကျမလည်း အစီအစဉ်မရှိပဲ လိုက်လာရတာဖြစ်လို့ အိတ်ထဲမှာ ရှူဆေးဘူးလေး တောင်ပါမလာခဲ့ပါဘူး။ ပေ့ါပေါ့ပါးပါးဖြစ်အောင်ဆိုတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ ကိုင်နေကြအိတ်ကို ယူမလာမိတဲ့ အမှားလည်း ပါပါတယ်။ (အဲ့ဒီအိတ်ထဲမှာတော့ ရှူဆေးဗူး၊ ပ၀ါပါးလေး၊ လက်သည်းညှပ်၊ နှုတ်ခမ်းဆိုး အဆီတောင့်၊ ဘီး… စတဲ့ စုံတကာတွေ တစ်လေးကြီး သယ်လေ့ ရှိပါတယ်။)
Science Centre ရှေ့ရောက်တော့ ပျော်စရာကြီး။ ကျောင်းပေါင်းစုံက ကားတွေ တစ်စီးပြီး တစ်စီး ထိုးဆိုက်။ အရွယ်ပေါင်းစုံတဲ့ ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူလေးတွေ ကိုယ့်ကျောင်းအစုနဲ့ကိုယ် Centre ထဲ တန်းစီဝင်သွားကြတာပါပဲ။ ကျမကတော့ တစ်နေရာကို သတိရနေပါပြီ။ ရုပ်နဲ့ နာမ်က ပူးလိုက်ကွာလိုက် ဖြစ်နေရခြင်းကတော့ ငါရောက်နေတဲ့ နေရာနဲ့ ငါတို့ဆီမှာ တစ်ထပ်တည်းဖြစ်မနေလို့ ဆိုတာ ခံစားဖူးသူတိုင်းသိကြမှာပါ။
ကျမတို့ ပထမဦးဆုံး Bubble mania Show ကို ကြည့်ကြရပါတယ်။ နောက်တော့ Water Exhibition ။ ကူညီပါရစေဆိုတဲ့ ၀န်ထမ်းတွေကလည်း နေရာတိုင်းမှာမို့ ဒီပွဲအတွက် တိုးချဲ့ အင်အားဖြည့်ထားသလား လို့တောင် ထင်မိရပါတယ်။ ၁၀း၁၅နာရီကနေ ၁၀း၄၅ထိ မုံ့စားကြဖို့ breakပေးပြီး၊ ရုပ်ရှင်ကြည့်ဖို့ Omni Theatre ကို ချီတက်ကြပါတယ်။
Grand Canyon: River at Risk ကားကြည့်ခဲ့ကြရပါတယ်။ ပုံမှန်အားဖြင့် ရှပ်ရှင်ဆိုတာ တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်စွာ ကြည့်ရတာမျိုးဖြစ်ပေမဲ့ ကလေးတွေနဲ့ တဝေးဝေး တ၀ါးဝါး ကြည့်ရတဲ့ ဒီ show ကတော့ အခွင့်ထူးတစ်ခုပါ။
ကျောင်းကို ပြန်ရောက်တော့ ဆရာမက “Say thank you to Chris’ mum” ဆိုတော့ ကလေးတွေက တပျော်တပါး ၀ိုင်းအော်ကြတာ “Thank you, Auntie, you’re rock” တဲ့။ သားတို့လည်း ပြန်လို့ရပြီဆိုတော့ သားအမိနှစ်ယောက် အတူတူပြန်ခဲ့ကြတယ်။ နေ့လည် ၁ နာရီ။ (သားတို့ ကျောင်းဆင်းချိန်က နေ့လည် ၁ နာရီ လေ။ ကွက်တိပဲနော်။)
ကျမ သားကြီး ကျောင်းမှာ Parent Volunteer အဖြစ် လိုက်ခဲ့ဖူးတဲ့ trip တွေက
၁။ Singapore Changi Airport - ၂၅.၀၅.၂၀၀၅
၂။ Singapore Zoological Garden - ၂၉.၀၇.၂၀၀၅
၃။ Singapore Science Centre -၂၄.၀၉.၂၀၀၈